HTC Desire 21 Pro bụ ekwentị 5G ọhụrụ na Snapdragon 690 na 90 Hz panel | Gam akporosis
HTC Desire 21 Pro bụ ekwentị 5G ọhụrụ na Snapdragon 690 na 90 Hz panel
HTC ekwuputala ihe mbụ 5G smartphone na usoro Ọchịchọ, ọ na-eme ya na mgbawa Qualcomm nke ejiri na ngwaọrụ dị n'etiti. HTC Desire 21 Pro bụ ekwentị ọhụrụ ekpughere site na ụlọ ọrụ, niile mgbe na-eweta ihe nlereanya na October 20, 2020 HTC Ọchịchọ 20+.
Site na nke a, ụlọ ọrụ Taiwanese chọrọ ịbanye n'ụzọ zuru oke n'ahịa na-enye ọdụ ike dị elu, ebe ọ bụ na n'agbanyeghị na ọ na-etinye mgbawa SD690, ọ na-abịa na RAM zuru ezu na nchekwa. A ga-akpọ ya ka ya na ndị dị n'etiti Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, n'etiti ndị nrụpụta ndị ọzọ.
1 HTC Desire 21 Pro, nke na-adọrọ mmasị n'etiti
2 Batrị zuru ezu na ụgwọ ngwa ngwa
HTC Desire 21 Pro, nke na-adọrọ mmasị n'etiti
El HTC Desire 21 Pro na-etinye nnukwu ihuenyo 6,7-inch Iji mkpebi HD zuru oke, nke dị mma bụ na panel ahụ enweghị bezels belụsọ na ala. Usoro a bụ 20: 9, ọnụego ume bụ 90 Hz ma ọ dakọtara na HDR10, ekwentị nwere ike nweta ezigbo arụmọrụ.
Gụnyere ihe nhazi Snapdragon 690 nwere modem 5G agbakwunyere, akụkụ eserese ahụ kpuchiri Adreno 619L, 8 GB nke nchekwa na 128 GB nke nchekwa, ha niile nwere ohere ịgbasa ya site na MicroSD. Enwere naanị 8/128 GB nhọrọ, yabụ na-echeghị na a ga-enwe ụdị ọzọ n'oge ahụ.
Ihe igwefoto ruru anọ bụ ndị nke azụ, nke nke mbụ bụ megapix 48, nke abụọ bụ 8pipixel obosara, nke atọ bụ nnukwu megapixel 2 na nke anọ bụ 2 megapixel Bokeh. Igwefoto dị n’ihu dị n’etiti nke ihuenyo na 16 megapixels.
Batrị zuru ezu na ụgwọ ngwa ngwa
HTC kpebiri iji batrị 21 mAh kwupụta Desire 5.000 Pro, ọ gafere ezuru iji rụọ ọrụ ụbọchị niile na-enweghị mkpa ịgba ụgwọ. Ejiri 18W boro ya ebubo, yabụ na a ga-akwụ ụgwọ zuru ezu na elekere elekere na nkeji 25.
Naanị ọdịda ọ bụ na ọ naghị adị ngwa ngwa ịkwanye ya ka e wee nwee ike ịgba ya obere ọsọ karịa ka ọ dị na mbụ, mana ọ bụ ụdị USB-C. Na HTC Desire 21 Pro Ọ na-ezute atụmanya ahụ na n'ihi ikike ya, ọ bụ ekwentị anyị nwere ike iji ya na ngwa anyị na-arụ kwa ụbọchị ma ọ naghị ata ahụhụ.
Na ngalaba njikọta, ọ pụtara nke mbụ ịbụ 5G ọnụ nke ụlọ ọrụ, na-ejikọ modem dị n'ime Snapdragon 690 nke ga-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na njikọta data nke ise. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS na akara mkpisiaka dị n'akụkụ maka ịkpọghe.
Sistemụ bụ gam akporo 10 n'ụzọ dị ọcha, ọ na-akawanye ịwụnye ngwa ndị bụ isi maka ojiji ya, ọ nwekwara ohere ịbanye na Storelọ Ahịa Play ma ị nwere ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ ozugbo ị gbanyere ya. HTC chọrọ na Desire 21 Pro jisie ike iji merie ahịa nke ndị ọrụ chọrọ ekwentị na arụmọrụ na operability.
HTC chọrọ 21 PRO
IKIRU 6.7-anụ ọhịa IPS LCD na Full HD + mkpebi / 90 Hz ume ọhụrụ / HDR10 / 20: 9
Nhazi Qualcomm Snapdragon 690
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB / Nwere oghere MicroSD
GHARA CAMERAS Onye isi ihe mmetụta 48 MP / 8 MP nnukwu ihe mmetụta / 2 MP macro sensor / 2 MP bokeh sensor
N'ihu CAMERA 16 MP isi ihe mmetụta
Njikọ 5G / Wi-Fi ac / Bluetooth 5.1 / NFC / GPS
Mkpụrụ na arọ: 167.1 x 78.1 x 9.4 mm / 205 gram
El HTC Desire 21 Pro 5G dị ugbu a na Taiwan ibido na agba abụọ: ọlaọcha isi awọ na lilac. Ọnụahịa ya bụ TWD 11,990 (euro 350 iji gbanwee) na mwepụta na Europe n'oge a amaghị n'oge ahụ, yana mbata na mba ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC Desire 21 Pro bụ ekwentị 5G ọhụrụ na Snapdragon 690 na 90 Hz panel
Ihe ịrịba ama na-etolite 4.300% na ọnụ ọgụgụ nke nbudata mgbe esemokwu kpatara na WhatsApp na nzuzo
Etu esi etinye aha na Telegram na ndụmọdụ gbasara nchekwa maka akaụntụ gị